Maxaa ka ogtahay waajibaadyada shaqo ee guddiga amniga ee golaha wakiillada Puntland? – Warbixin – Kalfadhi
Guddiga amniga iyo nabadgelyada ee golaha wakiillada Puntland waa mid ka mid ah tobanka guddi ee golaha kuwooda ugu muhiimsan ee la xisaabtanka iyo kor-joogtaynta ku leh hay’adaha amniga iyo nabadgelyada ee xukuumadda.
Waxaa xilligan hoggaaminaya Gen. Cabdicasiis Siciid Gacamey oo mudo dheer ka shaqaynayay ciidamada isla markaasna xiliyo kala duwan soo noqday taliyaha ciidanka booliska Puntland in kastoo uu lixdii sano ee ugu dambeeyay xubin ka ahaa golaha wakiillada.
Wuxuu ka mid ahaa baarlamankii Afraad, wuxuuna mar kale dib ugu soo guulaystay xubinta baarlamanka doorashadii dhowayd. Bartamihii febraayo ayaa guddoonku shaaciyay inuu hoggaamin doono guddigan. Waa guddi ka kooban lix xubnood oo ay ku jiraan wasiirkii hore ee amniga hadana ah Xildhibaan Cabdijamaal Cismaan Maxamed iyo taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Bari hadana ah Xildhibaan Cabdixakiin Yusuf Cismaan.
Hawlaha ugu waa weyn ee ay guddigani qabtaan waxaa ka mid ah; Kormeerka iyo la socodka xaaladaha nabadgelyo iyo Amni, ururinta dhacyooyinka nabadgelyo iyo amni-xumo ee u baahan in deg deg wax looga qabto. Waxay sidoo kale kormeeraan iyo isla markaasna talo siiyaan hay’adaha amniga qaabilsan, sida xogtan ku heshay Kalfadhi.
Docda kale, waa guddi ay u taalo hawl ay su’aalo badani ka jiraan oo ah la socodka xaaladaha iyo tayada ciidamada Puntland oo inta badan ka cawda dhinacyada mushaaraadka iyo xuquuqaadka kale ee asaasiga ah.
Guddigan ayaa sidoo kale baarlamanka war-bixin ka siiya xaaladaha tahriibta iyo la dagaalanka Burcad-badeeda iyagoona hay’adaha nabadgelyada kula xisaabtama hababka loo dhimayo isla markaasna wax looga qabanayo dhibaatooyinkan.
Guddiyada oo ay badankood hogaaminayaan xubno cusub oo baarlamanka ah ayaa hadda ku jira is-barasho ay la yeelanayaan hay’adaha dowladda ee ay la xisaabtanka iyo korjoogtaynta ku leeyihiin. Waxaana war-bixinno siin doonaan Kalfadhiga 44raad ee baarlamanka oo furmaya bartamaha Juun.
Baarlamanka Puntland oo xukuumadda u jeediyay in deg deg looga hawlgalo jidadka daadadku jareen